Omni Nwoma No
1 Hwɛ, ɔbaa dɛ emi, Omni, m’egya, Jarom, hyɛɛ me dɛ menkyerɛw biribi wɔ mprɛtse yinom do ama hɛn ebusuasantsen eetsim—
2 Dɛm ntsi, mepɛ dɛ hom hu dɛ maber do no, medze nkrantsee kõo pii dze gyee mo nkorɔfo Nephifo no, fii hɔn atamfo, Lamanfo no nsa. Mbom hwɛ, emi mara dze, meyɛ omumuyɛnyi, na menndzi Ewuradze ne nhyehyɛɛ nye ne mbrasɛm do dɛ mbrɛ ɔsɛ dɛ meyɛ.
3 Na ɔbaa dɛ mfe ahaebien eduosuon esia botwaa mu kɔree, na yenyaa asomdwee mber pii; na yɛkõo enyiberdo na yɛkãa bɔgya guu mber pii. Nyew, ne sin ara nye dɛ, mfe ahaebien eduowɔtwe ebien botwaa mu kɔree, na medze mprɛtse yinom siei dɛ mbrɛ m’egyanom hɔn ambrasɛm no se; na medanee maa me babanyin Amaron. Na emidze mewie medze kyerɛw.
4 Na afei emi, Amaron, merekyerɛw biribi kakra a ɔsɛ dɛ mekyerɛw, wɔ m’egya no nwoma yi mu.
5 Hwɛ, ɔbaa dɛ mfe ahaebiasa eduonu botwaa mu kɔree, na Nephifo no mu dodow a wɔyɛ emumuyɛdze kɛse no awɔsɛɛ hɔn.
6 Na Ewuradze remma kwan ma ɔmmba no dɛ woeyi hɔn efi Jerusalem asaase do ekyir no, na wɔagye hɔn efi hɔn atamfo nsamu na ɔahwɛ hɔn do, nyew, ɔremma kwan mma wɔnnsesã ne nsɛm no, dza ɔkãa kyerɛɛ hɛn egyanom dɛ: Mbertsentsen biara a hom bɔpow dɛ hom bedzi me mbrasɛm do no hom nnkɛyɛ prɔmprɔm wɔ asaase no do.
7 Dɛm ntsi, Ewuradze dze atsɛmbu a ɔyɛ dzen baa hɔn do dze, naaso, ɔamma kwan ma atseneneefo no annhera; mbom ɔgyee hɔn fii hɔn atamfo nsamu.
8 Na ɔbaa dɛ medze mprɛtse no hyɛɛ mo nuabanyin Chemish nsa.
9 Afei emi, Chemish, merekyerɛw ndzɛmba kakra ara wɔ mo nuabanyin no nwoma kor yi ara mu; na hwɛ, muhun dza ɔkyerɛɛw no ekyir yi, dɛ ɔdze noara ne nsa kyerɛwee; na ɔkyerɛɛw no dɛm da noara a ɔdze maa me no. Na dɛm na yɛdze nkyerɛwee no siei, dɛ mbrɛ hɛn egyanom hɔn mbrasɛm no kyerɛ. Na medze me nsɛm aba ewiei.
10 Hwɛ, emi, Abinadom, meyɛ Chemish ne babanyin. Hwɛ, ɔbaa dɛ muhun akõkoekõ na wentwiwentwi pii wɔ mo nkorɔfo Nephifo na Lamanfo mu; na emi, medze mankasa me nkrantsee kum Lamanfo no mu pii dɛ me dze regye mo nuanom.
11 Na hwɛ, nkorɔfo yi hɔn ho nsɛm no woekrukye no wɔ mprɛtse a ahemfo no dze esie no do, dɛ mbrɛ ebusuasantsen no tse, na minnyim nyikyerɛ biara kã dza wɔakyerɛw no ho, na minnyim nkɔnhyɛ biara so; dɛm ntsi, dza wɔakyerɛw no ara dɔɔ sõ. Medze me nsɛm aba ewiei.
12 Hwɛ, emi nye Amaleki, Abinadom ne babanyin. Hwɛ, mebɛkã biribi a ɔfa Mosiah ho akyerɛ hom, nyia wɔhyɛɛ no hen wɔ Zarahemla asaase do no; na hwɛ, ɔno na Ewuradze bɔɔ no kɔkɔ dɛ otwar dɛ oguan fi Nephi aasaase do, na dodowara so a wobetsie Ewuradze ne ndze no bmfi asaase no do nye no nkɔ sar no do—
13 Na ɔbaa dɛ ɔyɛɛ no dɛ mbrɛ Ewuradze hyɛe no ara. Na wofii asaase no do kɔr sar no do, dodow biara a wotsiee Ewuradze ne ndze no, na nsɛmpakã nye nkɔnhyɛ pii na wɔdze koraa hɔn do. Na wɔkɔr do dze Nyame n’asɛm kaakaa hɔn; na no tum abasa na ɔwowaa hɔn wɔ sar no do kesi dɛ wɔbaa asaase a wɔfrɛ no Zarahemla asaase no do.
14 Na wokopuee nkorɔfo bi a wɔfrɛ hɔn aZarahemlafo do. Afei, Zarahemlafo no dzii dɛw kɛse; na bio, Zarahemlafo nyaa enyigye mbordo, osiandɛ Ewuradze ama Mosiah no nkorɔfo dze bayewa mprɛtse no a Jewfo hɔn kyerɛwsɛm wɔ do no aba.
15 Hwɛ, ɔbaa dɛ Mosiah kohun dɛ aZarahemlafo no fii Jerusalem wɔ aber a wɔfaa bZedekiah, Judahhen no ndɔmmum mu kɔr Babylon no.
16 Na wotuu hɔn kwan wɔ sar no do, na Ewuradze ne nsa na ɔdze hɔn twaa esu akɛse no, dze hɔn baa asaase a Mosiah kopuee do no do; na hɔ ara na wɔatsena fitsi dɛm aber no.
17 Na aber a Mosiah kopuee hɔn do no, nna wɔadɔr dodow. Naaso, nna woedzi akõkoekõ na woehyia wentwiwentwi a ɔyɛ dzen pii, na wɔatotɔ wɔ nkrantsee ano so pii fi ber to ber; na hɔn kasaa asɛɛ; na wɔammfa akyerɛwsɛm biara annkã hɔnho ammba; na wɔpoow dɛ wɔbɛgye edzi dɛ hɔn Bɔadze no tse ase; na Mosiah, anaadɛ, Mosiah no nkorɔfo no anntse hɔn kasaa.
18 Mbom ɔbaa dɛ Mosiah hwɛe ma wɔkyerɛkyerɛɛ hɔn ɔnoara ne kasaa. Na ɔbaa dɛ aber a wɔkyerɛkyerɛɛ hɔn Mosiah ne kasaa no ekyir no, Zarahemla bobɔɔ n’egyanom hɔn ebusuasantsen no edzin, dɛ mbrɛ obotum akaakaa; na wɔkyerɛwee, na mbom onnyi dɛm mprɛtse yinom do.
19 Na ɔbaa dɛ Zarahemla no nkorɔfo no nye Mosiah no nkorɔfo no abɔɔ mu; na woyii bMosiah dɛ ɔmbɛyɛ hɔn hen.
20 Na ɔbaa dɛ Mosiah n’aber do no wɔdze ɔbo kɛse bi brɛɛ no a woekrukye nsɛm bi wɔ do; na ɔnam Nyame n’akyɛdze na no tum do akyerɛɛ nkrukyee no ase.
21 Na wɔkãa aCoriantumr bi ho asɛm, na mbrɛ wosii kunkum no nkorɔfo no. Na Zarahemla no nkorɔfo na wokopuee Coriantumr do; na ɔnye hɔn tsenaa hɔ bɛyɛ abosoom akron ntamu.
22 Ɔkãa n’egyanom so ho nsɛm kakra. Na n’awofo fi aabantsentsen no mu bae, wɔ aber a Ewuradze btotõo dɔm no hɔn kasaa no; na Ewuradze n’atsɛmbu dzendzen no a ɔyɛ pɛrpɛr no baa hɔn do; na hɔn cmbiew petsee asaase a ɔwɔ etsifi no ho no do.
23 Hwɛ, emi, Amaleki, wɔwoo me wɔ Mosiah n’aber do; na matsena ase akɛpem no wu da; na aBenjamin, ne babanyin no, na odzii n’adze.
24 Na hwɛ, muhun ɔhen Benjamin ne nda mu akõkoekõ, na bɔgya pii na wokyii wɔ Nephifo na Lamanfo mu. Mbom hwɛ, Nephifo no nsa daa hɔn do; nyew, araa ma ɔhen Benjamin yii hɔn edzi fii Zarahemla asaase do.
25 Na ɔbaa dɛ mehyɛɛ ase dɛ mereyɛ akɔdaa a nna minnyi aba, na minyim dɛ ɔhen aBenjamin yɛ nyimpa a odzi pɛrpɛr wɔ Ewuradze enyim, dɛm ntsi, bmedze mprɛtse yinom bɛma no, dze etu dɔm no nyinara fo dɛ wɔmbra Nyankopɔn, Israel Krɔnkrɔnnyi no nkyɛn, na wɔngye nkɔnhyɛ, nye nyikyerɛ, na sor abɔfo hɔn som, nye kasa horow akyɛdze na kasa nkyerɛ ase akyɛdze, na adze nyinara a coye no ndzi; na biribiara nnyi hɔ a oye gyedɛ ofi Ewuradze nkyɛn; na dza ɔyɛ bɔn no fi abɔnsam.
26 Na afei, mo nuanom adɔfo, mepɛ dɛ hom aba Christ nkyɛn, nyia ɔyɛ Israel Krɔnkrɔnnyi no, na hom mbɛfa no nkwagye na ɔpon tum no bi, Nyew, hom mbra ne nkyɛn, na hom bmfa hom akra nyinara cmbɔ afɔr mma no, na hom nkɔ do wɔ dakɔnkye nye mpaabɔ mu, na hom ntsim nkodu ewiei; na dɛ Ewuradze tse ase yi wɔbɛgye hom nkwa.
27 Na afei mebɛkã hom asɛm bi a ɔfa nkorɔfo bi a wɔkɔr sar no do ama wɔasan akɔ Nephi asaase do no ho; na pii na wɔpɛɛ dɛ wɔbɛfa hɔn egyapadze asaase no.
28 Dɛm ntsi, wɔkɔr sar no do. Na hɔn ɔkandzifo no yɛ nyimpa a ɔyɛ dzen na ɔsõ, na ɔyɛ nkɔnkyenyi ntsi, ɔdze wentwiwentwi baa hɔn ntamu; na awokunkum hɔn nyinara, ma ɔkaa eduonum pɛr wɔ sar no do, na wɔsaan bio kɔr Zarahemla asaase do.
29 Na ɔbaa dɛ wɔfaa binom so, na wotuu hɔn kwan no bio kɔr sar no do.
30 Na emi, Amaleki, mowɔ onuabanyin bi a ɔnye hɔn kɔree; na ofitsi dɛm aber no menntsee biribiara a ɔfa hɔnho bio. Na aka kakra ma makɔ me nda mu; na amprɛtse yinom so ayɛ mã ntsi medze me kasaa aba ewiei.
Mosiah 8:13–19. KK Adzehunyi.
Ether 12:1. KK Coriantumr.
Gen. 11:6–9; Mosiah 28:17; Ether 1:33.
M ne N 1:3.
M ne N 1:17–18; Mosiah 29:13.
M ne N 1:10.
Alma 5:40; Ether 4:12; Moro. 7:15–17.
KK Akɔnkye, Kye Kɔm.